ဂျာမနီမှာရေပန်းစားသောအိန္ဒိယကျောက်ခဲ | Flodeal Inc မှ.
ဂျာမနီနှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံကမ္ဘာ၏အကြီးဆုံးစီးပွားရေးတို့တွင်အများမှာ. အိန္ဒိယနှင့်အတူဂျာမနီရဲ့စုစုပေါင်းကုန်သွယ်မှုခဲ့သည် 15.8 Billion Euro in the Financial year 2013-2014. သဘာဝကျောက်ခဲအပါအဝင်အိန္ဒိယကုန်ပစ္စည်းများ၏ဂျာမဏီသွင်းကုန်တွေအများကြီး. အိန္ဒိယသဘာဝကျောက်ခဲဂျာမနီအတွက်အလွန်လူကြိုက်များ. ဤတွင်ကျွန်တော်ဂျာမနီမှာလူကြိုက်အများဆုံးအိန္ဒိယကျောက်ခဲဆွေးနွေးရန်.
အခင်း, မြို့ရိုးကိုဝတ်, ရေချိုးခန်းကွက်များ, မီးဖိုချောင်ကောင်တာများ, and Memorials are main uses of Natural Stones from India. German companies Import3အိန္ဒိယကနေသဘာဝကျောက်ခဲအမျိုးအစားများ. ဤစာရင်းတွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်လက်ခံရရှိမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များပေါ်တွင်အခြေခံထားသည်. ဂျာမနီမှာအများအပြားကိုပိုမိုလူကြိုက်များအိန္ဒိယကျောက်ခဲရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်.
အိန္ဒိယစကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းအစဉ်အလာအခင်းများနှင့်မြို့ရိုးကိုဝတ်တစ်ခုလူကြိုက်များရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်. မကြာသေးမီကရှာဖွေတွေ့ရှိစကျင်ကျောက်ထဲကတချို့ဟာကျောက်မှအဆင်းလှသောအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်ခြင်းဘို့အကောင်းတစ်ဂုဏ်သတင်းကိုရရှိခဲ့သည်ပါပြီ. အဆိုပါပြီးနောက်ဂျာမနီမှာရေပန်းစားအိန္ဒိယစကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းများမှာ:-
အကြီးစားဧရိယာအခင်းများနှင့်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများ၏အဓိကအသုံးပြုမှုများမှာ Verde ဂွာတီမာလာစကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်း အိန္ဒိယကနေ. Bookmatched Verde ဂွာတီမာလာပြားအခင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးအသုံးပြုမှုများ. ဤသည်စကျင်ကျောက်အုပ်ကြွပ်၏အရွယ်အစားမှာလည်းရေပန်းစားသည်. 60x60x2 စင်တီမီတာဂျာမဏီသွင်းကုန်အုပ်ကြွပ် /3စင်တီမီတာ, 60x30x2cm, 60x40x2 စင်တီမီတာနှင့်ချိန်ညှိထားသောကြွပ် 1 စင်တီမီတာအထူ. tiles မြို့ရိုးကိုဝတ်နှင့် backsplash များအတွက်အသုံးပြုကြသည်.
မိုးသစ်တောဘရောင်း / စိမ်းလန်းသော / ရွှေစကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်း
မိုးသစ်တောစကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းမြွေသောကျောက်များမှာ. ဤလှပသောစကျင်ကျောက်အတွင်းရရှိနိုင်သုံးအရောင်များရှိပါတယ်, အစိမ်းရောင်နဲ့တူ, ညိုသော, နှင့်ရွှေ. ဤရွေ့ကားဂေါ်လီယေဘုယျအားဖြင့်မြို့ရိုးကိုဝတ်ဘို့အသုံးပြုကြသည်. တစ်ဦးက Brush ကိုခေါ်အထူးကုသမှုသို့မဟုတ်ရှေးဟောင်း finish ကိုမြို့ရိုးကိုဝတ်ဘို့လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ပါသည်. ဤသည်စကျင်ကျောက်ကို Rajasthan ၏ Bidasar ဧရိယာထဲမှာကျောက်တုံးကြီးများဖြစ်ပါတယ်, နှင့်ဤကိုလည်း Bidaser သို့မဟုတ် Bidasar စကျင်ကျောက်ကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်. ဒီစကျင်ကျောက်၏အဓိကသွင်းကုန်တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါနှင့်အုပ်ကြွပ် form မှာဖွစျပါတယျ.
မာကျူရီက Black / မာကျူရီအဖြူရောင်စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်း
မာကျူရီ Black နဲ့မာကျူရီ White ကအိန္ဒိယကနေမှောင်မိုက်စကျင်ကျောက်များမှာ. ဤရွေ့ကားလှပသောဂေါ်လီလုံးကအရမ်းသစ်ကိုစကျင်ကျောက်များနှင့်ရရှိနိုင်၌ရှိကြ၏2စင်တီမီတာနှင့်3စင်တီမီတာပြား. ဤရွေ့ကားသစ်ကိုဂေါ်လီလုံးမီးဖိုချောင်ကောင်တာများနှင့်မြို့ရိုးကိုဝတ်ဘို့အသုံးပြုကြသည်. နှစ်ဦးစလုံးဂေါ်လီခက်ဖြစ်ကြပြီးကောင်းသောချောယူ. အဲဒီနှစျခုဂေါ်လီ Brush များနှင့်ရှေးဟောင်းပြီးလည်းရရှိနိုင်ပါသည်.
ကျောက်အဓိကအားဖြင့်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများနှင့်ကြမ်းခင်းများအတွက်အသုံးပြုကြသည်. ဂျာမဏီသွင်းကုန် အိန္ဒိယကနေကျောက်အမျိုးမျိုး. အဆိုပါတင်သွင်းမှုယေဘုယျအားဖြင့်အုပ်ကြွပ်နှင့်တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ form မှာဖြစ်ကြောင်း. ကျနော်တို့ Absolute က Black ကျောက်ဖြည့်စွက်ကြသည်မဟုတ်, ကြယ်ပွင့်က Galaxy ကျောက်နှင့်စာရင်းမှာရှိတဲ့တခြားကအနက်ရောင်ကျောက်. ဤရွေ့ကားကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလူကြိုက်များကျောက်များမှာဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အဖြစ်စာရင်းအဖြစ်အများကြီးတိုတောင်းဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်:
Imperial White ကကျောက်တစ်လျောက်ပတ်သောအဖြူရောင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်, ဒီကျောက်ဂျာမနီမှာမီးဖိုချောင်ကောင်တာများနှင့်ကြမ်းခင်းများအတွက်ရေပန်းစားရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါပြားဖြတ်နေကြတယ်2နှင့်3စင်တီမီတာအထူ. Imperial White ကကျောက်၏ tiles ပိုလန်အတွက်ရရှိနိုင်ပါ, ချိန်ညှိ, ဘီဗဲလ် Finish. ဤသည်ဂျာမနီနိုင်ငံရှိလူကြိုက်အများဆုံးအဖြူရောင်ကျောက်တစျဦးဖွစျသညျ.
ဆင်စွယ်ဘရောင်းကျောက်တစ်ဦးအဝါနုရောင်ရှိသောနှင့်အညိုရောင်ကျောက်ဖြစ်ပါသည်. အိုင်ဗရီကို့စ်အညိုရောင်၏အခြား Sivakashi ကျောက်ဖြစ်ပါသည်. ဒီကျောက်များ၏အခြေစိုက်စခန်းသည်အလွန်ပါးလွှာအညိုရောင်လိုင်းများနှင့်အတူအညိုရောင်ဖြစ်ပါသည်. အိုင်ဗရီကို့စ်ဘရောင်းကက်ရှမီးယားအဖြူရောင်ကျောက်နဲ့ကက်ရှမီးယားရွှေကျောက်နှင့်အတူလူကြိုက်အများဆုံးကျောက်အခါအချိန်ရှိခဲ့သည်. အခြားနှစ်ဦးကိုကျောက်သည်ဤယခင်ကမရရှိနိုင်ခဲ့ကြသည်အတူတူအရောင်နှင့်အတူယခုရရှိနိုင်မဟုတျပါ. သို့သျောလညျး, အဆိုပါအိုင်ဗရီဘရောင်းကကျောက်တုန်းပဲရရှိနိုင်. ဂျာမဏီတင်သွင်းမှု2စင်တီမီတာနှင့်3စင်တီမီတာပြားနှင့်2စင်တီမီတာနှင့် 1 အိန္ဒိယကနေအိုင်ဗရီကို့စ်ဘရောင်းကျောက်အတွက်စင်တီမီတာအုပ်ကြွပ်.
multicolor နီကျောက်နီဖြစ်ပါသည်, အနက်ရောင်နှင့်အညိုရောင်ပုံစံနှင့်အတူအညိုရောင်ကျောက်. ဤသည်ကျောက် Worktops များအတွက်ရေပန်းစားရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါသည်, အထိမ်းအမှတ်, အထိမ်းအမှတနှင့်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများ. မြို့ရိုးကိုဝတ်နီရောင်စုံကျောက်၏အခြားအသုံးပြုမှုဖြစ်ပါတယ်. ဤသည်အနီရောင်ကျောက်မျိုးစုံအသုံးပြုမှုရှိပြီးရရှိနိုင်ပါသည်အရွယ်အစား. multicolor အနီရောင်ကျောက်၏ပြားနှင့်အုပ်ကြွပ် မှန်မှန်နှင့်အတူဂျာမနီမှာတင်သွင်းနေကြသည်4စင်တီမီတာ,5စင်တီမီတာ,6စင်တီမီတာ,7စင်တီမီတာ, 8 စင်တီမီတာနှင့် 10 စင်တီမီတာအထူအထိမ်းအမှတ်.
Paradiso Bash မှာ / ဂန္ထဝင်ကျောက်
Paradiso Bash မှာ Paradiso နှင့် Classico Banglore ကနေကျောက်များမှာ. ထိုသူနှစ်ဦးကျောက်အရောင်နဲ့ပုံစံအတွက်အနည်းငယ်ကွာခြားချက်ရှိ. ကြမ်းခင်းများနှင့်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများ Paradiso ကျောက်၏အဓိကအသုံးပြုမှုများမှာ. အဆိုပါ Paradiso Bash မှာကျောက်မီးဖိုချောင်ကောင်တာများအောင်အတွက်ရေပန်းစားသည်, Worktops နဲ့ memory. နှစ်ဦးစလုံးလှပသောခိုင်ခံ့မြင့်မားသောအရည်အသွေးကျောက်များမှာ. ဂျာမဏီသွင်းကုန်တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါနှင့် 1 ထိုအဆင်းလှပစ္စည်းများအတွက်စင်တီမီတာအထူအုပ်ကြွပ်.
ထိုကဲ့သို့သော Tan ကဘရောင်းကကျောက်အဖြစ်အခြားပစ္စည်းများရှိပါတယ်, ကော်ဖီဘရောင်းကျောက်, မြစ် White ကကျောက်, ခေါင်းဆောင် Hassan အစိမ်းရောင်ကျောက်, Kuppam အစိမ်းရောင်ကျောက် (Marina အစိမ်းရောင်), အကြွင်းမဲ့အာဏာက Black ကျောက်, Black ကက Galaxy ကျောက်စသည်တို့ကို. အရာဂျာမန် Market ကအတွက်ကျနော်တို့မှာအများကြီးလူကြိုက်များ. ကျနော်တို့အတိုစာရင်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့နှင့်များစွာသောကျောက်ပျောက်ဆုံးနေအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. သင့်အနေကနေသမျှသောဤကျောက် browse နိုင်ပါတယ် အိန္ဒိယကျောက် ကြှနျုပျတို့၏ website ၏အပိုင်း.
လမ်းဘေးလူသွားလမ်း, အခင်း. အထိမ်းအမှတ်နှင့်မြို့ရိုးကိုဝတ်အိန္ဒိယအနေဖြင့်သဲကျောက်များအဓိကအသုံးပြုမှုများမှာ. သဲကျောက်စကျင်ကျောက်နှင့်ကျောက်ထက်ကွဲပြားခြားနားသောဂုဏ်သတ္တိများရှိပါတယ်. တချို့ကသဲကျောက် poolside အခင်းများနှင့်ပြင်ပအခင်းအဘို့အအရောင်နှင့်အသုံးမယူပါဘူး. ဂျာမဏီအိန္ဒိယကနေသဲကျောက်အမျိုးမျိုးတင်သွင်း, နာမည်ကျော်အချို့ကိုအောက်ပါကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏:
သက်တံ & Teakwood သဲကျောက်
သက်တန့်နှင့် Teakwood ဂျာမန်ဈေးကွက်ထဲမှာလူကြိုက်အများဆုံးသဲကျောက်များမှာ. ဤကျောက်ခဲတို့ကိုအိန္ဒိယပိုင်. အိန္ဒိယကနေသက်တံ့ရောင်နှင့်သဲကျောက်များဂျာမဏီသွင်းကုန်အများအပြားကွန်တိန်နာ. သဲကျောက်၏အဓိကအသုံးပြုမှု poolside အခင်းအောင်အဘို့ဖြစ်၏, အထိမ်းအမှတ, အထိမ်းအမှတ်, မြို့ရိုးကိုကြွပ်, ပွင့်လင်းသောဧရိယာခင်း. အဆိုပါလူကြိုက်များအရွယ်အစားအတွက်ပြားများမှာ 2,3 နှင့်460x30x2,3,4 စင်တီမီတာအုပ်ကြွပ်နှင့်အတူစင်တီမီတာအထူ , 60x60x2,3,4 စင်တီမီတာ. သက်တံ့ရောင်၏အုပ်ကြွပ်အချိန်အဆညှိ & ကျွန်းသစ်သဲကျောက်လည်းလူကြိုက်များ. the Rainbow နဲ့ Teakwood သဲကျောက် တစ်ဦးအရောင်မယူကြဘူး. သက်တံ့ရောင်ရရှိနိုင်အဆိုပါ finish ကို & Teakwood ရုံဖြတ်ခြင်းနှင့် Honed Finish ဖြစ်ပါသည်.
ထို့အပွငျ Luna Grey က, Luna ဘရောင်း, ဆောင်းဦးရာသီ Grey က, ဆောင်းဦးရာသီဘရောင်း, Dholpur Beige သ, ပန်းရောင်, ချောကလက်နှင့်အခြားသဲကျောက်ဂျာမဏီမှာလည်းလူကြိုက်များ. အိန္ဒိယကနေအဆိုပါသဘာကျောက်များခင်းအဖြစ်အဓိကသုံးစွဲခြင်းရှိ.
အိန္ဒိယသဘာဝကျောက်စာ၏အရောင်ရာပေါင်းများစွာမှနေရာဖြစ်သည်, ဂျာမနီနှင့်အိန္ဒိယကျောက်စာကုမ္ပဏီများများအတွက်ကြီးမားသောစျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်. ကျနော်တို့ကွဲပြားခြားနားပြီးအားလုံးကိုသဘာဝကျောက်ခဲအထက်တွင်အောင်. သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျနိုငျ ဒီမှာ အိန္ဒိယကနေသဘာဝကျောက်ခေတ်သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များအတွက်.